Blog – Kumakomo Community Radio Station
by Trevor Mtisi May 15, 2020 Breaking 0 958
A recent interview with MAYA, Mutare Zimbabwe like many countries has been under a Covid19 induced lockdown as the nations scramble for a solution which has so far proved elusive. The last 45 days have sent Mutare into a deep slumber as people have been forced to stay home due to the Covid 19 lockdown.
Ikodzero yako kuziva nezveBumbiro remitemo yenyika
by Sydney Mangweka April 20, 2020 Breaking 0 1091
Unozviziva here kuti ikodzero yemunhu wose kuziva bumbiro remutemo renyika. Wana mukana wokuteerera rumbo urwu ugokurudzirwa kuziva Bumbiro renyika yedu yeZimbabwe.
LOCK DOWN INOBATSIRA SEI PAKUMISA DENDA RECOVID-19
by Sydney Mangweka April 08, 2020 Breaking 0 1178
Zimbabwe, nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzemhiri kwamakungwa dzakatora chidanho chokumborega kuenda kumabasa (lockdown) zvichitevera kupararira kwechirwere cheCoronavirus (COVID 19). Zvitoro, zvikoro, nzvimbo dzokudyira namabhizimusi zvakakurudzirwa kuvharwa, ruzhinji ruchitarisirwa kugara mumisha yavo kuedza kuderedza nokumisa kupara kwechirerwe cheCOVID 19. Chirwere cheCOVID 19 chinounza matambudziko mukufema nechikosoro chakaomarara. Vanamazvikokota vezveutano navanamazvikotokota mukutsvaga zivo dzezvehutano havasati vawana mushonga unokwanisa
MASHOKO EHUTANO KUBVA KUNA WILLARD KATSANDE
by Sydney Mangweka April 04, 2020 Featured 0 981
Mutambi wenhabvu mukuru, anotambira chikwata chema Worriors ari zvakare mutambi kuKaizer Chiefs’ Willard Katsande anotipa mashoko echenjedzo pamusoro pedenda re Coronavirus (COVID 19). Iwai nekuteerera kwakanaka